World Cup 2018: Gịnị mebiri egwuregwu ndị Afrịka na Rọshịa? - BBC News Ìgbò
30 Juun 2018
Nkenke aha onyonyo Ndị na-akwado Naịjirịa, Moroko na Senegal na-egosi mwute ha ka agbapụrụ ndị otu ha n'asọmpi a
Ọpụpụ Senegal n'asọmpi Iko Mbaụwa pụtara na nke a bụ ọpụpụ Afrịka kachasị njọ n'ime afọ 36, nke bụ na-enweghị onye si na mpaghara a ruru n'agba mgbapụ kamgbe 1982.
Ka ha na-abanye asọmpi a, olileanya ndị mmadụ bụ na Afrịka nwere ike ime ihe ha mere n'asọmpi nke Brazil 2014, ebe ọ bụ mbụ otu abụọ - ya bụ Naịjirịa na Ọlgeria - ga-eru agba mgbapụ.
Kama, mpaghara ụwa a ga na-ajụ onwe ha ebe ihe si mebie ka egwuregwu 15 ha gbara pụtara na mmeri 10, ebe a gbara onye laba onye laba abụọ ma nweta naanị mmeri atọ.
World Cup 2018: Rọshịa emeriela Ijipt 3-1
Kedụ ihe a ga-ebo ebubo: ihu ọjọọ, VAR, ka ọ bụ amaghị agba?
Eze ndị Ijipt merụrụ ahụ
Ihe a kwesịrị ịbụ asọmpi nke mba Ijipt ga-agbanwe ọnọdụ ha n'asọmpi Iko Mbaụwa, n'otu aka makana a na-ele otu ha anya na ha esighị ike; n'aka ọzọ na ha nwere otu n'ime ndị kacha agba bọọlụ n'ụwa ugbua.
Mana etu ọbụla ị si chọọ ile ya anya, Mohamed Salah kparala ndị Ijipt ike - o nyere goolu asaa, nye aka inye abụọ, n'ime goolu 10 ha gbara site n'oge ha chọrọ ituru ugo ịbata Iko Mbaụwa ruo oge a gbapụrụ ha na Rọshịa.
Nkenke aha onyonyo Mo Salah akpachaghị ike n'asọmpi a etu e chere na ọ ga-eme
Ọ raghị ndị na-akwado ya ahụ ịmata uru ọ bara, ka ahụ o merụrụ na ngwụcha Champions League mere na o soghị gbaa egwuregwu mbụ ha na Yuregua gbara.
Ka ọ na-anọghị ya, Marwan Mohsen bụ onye nyerela naanị otu goolu n'ime egwuregwu 23 ọ gbarala ndị Ijipt, akpanwughị ụdịrị ike ọ na-akpa.
Asigodu na ahụ gbasiri Salah ike tupu asọmpi a ebido, o doghị anya etu ndị Ijipt kpọrọ onwe ha ndị Pharoah gaara esi mee n'ihe bụ asọmpi mbụ ha n'ime afọ 28.
Nke a abụghị ihe atụwara anya n'aka otu Hector Cuper na-achịkọta, maka na kwa mgbe kwa mgbe ha mehiere - site n'itikọta Ali Gabr na Ahmed Hegazi ọnụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, ndị oche goolu ha bụ Mohamed El Shenawy mere ọfụma ọkachasị ka ha na Yuregua zutere, ebe oche goolu Afrịka ji eme ọnụ bụ Essam El Hadary dị afọ 45, mere ihe a ga-eji cheta ya site n'ịbụ onye kachasị nka n'asọmpi a, ma chekwaa penariti pụrụ iche.
Nke ahụ bụ mbụ ha na-anọ n'ihu n'asọmpi Iko Mbaụwa, mana ka afọ 84 gachara, ha ka na-achọ inweta otu mmeri.
Ndị Atlas Lions agbọghị ụja
Njem Moroko na Iko Mbaụwa yasara mgbe ha riri ọkpụ nke aka ha ka asọmpị ha na Iran na-abịa na mgwụcha, nke nyere Iran mmeri 2-1.
Onye nkụzị Moroko kpọrọ asọmpị a "World Cup Final", nke putara na ọ bụ asompị nke ha kpọrọ mkpa. Ihu ya ka agbachara asọmpị a gosiri na ya bu ihe were ya iwe.
Nkenke aha onyonyo Ndị nkwado Moroko nwere aṅụlị etu ndi egwuregwu ha si gbaa bọọlu n'asọmpị a
Mana, site mgbe ahụ gawa, Moroko gbara ọfụma.
Ihe kpọghachịrị Moroko azụ bu na ha enweghi ndị ma etu esi enye goolu.
Naịjirịa - otu egwuregwu nke echi
Mmeri ndị Ajentina meriri Naịjirịa butere oke nkatọ na Naịjirịa dị ọtụtụ na-ajụ ihe mere echekwaghị ọnụ neetị nke ọma na n'oge ngwụcha asọmpi ahụ, mana oge ndị Super Eagles na Rọshịa jupụtara n'ihe ọma.
Agbanyeghị na etinyere ha "n'otu nke ọmwụ", otu a kachasị jupụta na ndị ntoroọbịa n'asọmpi a nwere ndị ọgba bọọlụ mmadụ 18 na-agbabeghi asọmpi Iko Mbaụwa mbụ ka ọfọdụrụ naanị nkeji anọ ka ha gafee agba nke abụọ.
Nkenke aha onyonyo Goolu Victor Moses nyere site na Penariti nyere Naịjirịa olileanya megide ndị Ajentina
Ihe a bụghị otu Naịjirịa ndị nwere ngozi ọkpụkụ aka dịka ndị nke 1990 mana ha jupụtara n'ịdị 'otu na nkwekọrịta nke na-adịkarịghị n'otu ndị Super Eagles.
"E che m na ọdịnaihu dịrị ndị Naịjirịa maka na enwere oke ị dị n'otu - ị hụrụ n'oge tara akpụ, udị mmụọ otu a nwere," onye nchịkọta Gernot Rohr gwara BBC Sports.
Nwafọ Jamịnị kwara arịrị etu ndị otu si amalite asọmpi ha niile na Rọshia, dịka Naịjirịa si daa n'ịkwanye ndị ọ bụ ha na ha ọkụ n'ike n'oge mbụ.
Nke a gara nke ọma karịa ndị ọzọ nke bụ na-anụghị akụkọ ọbụla banyere esemokwu ndị isi nakwa akwụghị ha ụgwọ n'oge dịka o kwesiri
Ogbenye ndị Tunisịa
Tunisịa adịghị ike nkeọma ị gafe agba nke bụ siri ike gụnyere ndị Beljọm na Ịngland nke a bụ okwu si n'ọnụ onye nchekọta ha.
"Anyị nọ n'ebe dị anya n'ogogo a chọrọ," Nabil Maaloul kwuru, onye ndu bụ Wahbi Khazri kwukwara na ndị otu ya hụtara ndị nọ n'otu dịka ndị ka ha ukwuu nkeọma n'ogogo.
Nkenke aha onyonyo Tunisịa meriri ndị Panama n'asọmpi ha nke mbụ n'Iko Mbaụwa n'agba nke mbụ
Ndị Carthage Eagles daara mgbapụ asọmpi ha mgbe Ịngland meriri ha na ngwụcha oge mana ha hiwere obere aha dị oke ọnụ.
N'arụghị ụka, otu a nwere ndị dị elu n'akara aka ahụtaghị enyemaka onye ọkacha agba ha bụ Youssef Msakni bụ onye mụrụ ahụ- mana ahụtaghị ọrụ ya n'otu dịka mba Beljọm gbara ha ọkpụ ise asatara abụọ.
Agbanyeghi nke a Tunisịa hapụrụ asọmpi a dịka ndị kachasị nweta goolu n'Afrịka niile - nakwa o juju afọ.
Ndị kwụọtọ dara n'ikpeazụ nke Afrịka
Senegal bụ olileanya ndị ndị Afrịka mgbe ha merichara ndị Poland n'asọmpi nke mbụ ha nakwa nke Afrịka niile.
2-2 ha na ndị Jaapan gbara bụ nke ha bụ ụzọnye goolu abụọ mepere ụzọ ndapụ n'asọmpi ha na ndị Kolombịa - nke mechara bụrụ eziokwu.
Senegal mechara daapụ n'Iko Mbaụwa mgbe ha nwetere akwụkwọ ị dọ aka n'antị karịa ndị Jaapan.
Nkenke aha onyonyo Ọtụtụ mmadụ chere na Senegal bụ otu kachasị mma n'Afrịka mana obi gbawara ha oge agbapụrụ ha.
Ọtụtụ ndị Senegal etiela mkpu n'iwu ọhụrụ ndị Fifa mere ha ji pụọ n'asọmpi a maka nnupuisi ha, onye nchịkọta ha bụ Aliou Cisse ekwenyeghi na nke a ma kwuo na "ndị otu etozoghi" ị gafe n'agba ọzọ.
Dịka ọ dị n'ebe Egypt na Salah nọ, ọtụtụ ndị tụkwasịrị obi n'ebe Sadio Mane nọ mana ọ rara ya ahụ ime nke ọma n'asọmpi ahụ.
Senegal bụ otu ọzọ n'Afrịka na-enweghi ndị ọgba n'etiti mana ha gbaliri n'ụzọ ndị ọzọ, ebe Kalidou Koulibaly na Salif Sane gbakọtara ọnụ n'ebe etiti.
VAR o meriri mba Afrịka?
Edela ma kwuo ọtụtụ ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ nke video assistant referee (VAR) ndị Fifa wepụtara n'asọmpi a mana ọ bụghi ihe ịtụ n'anya na-echichi onye ọbụla dị iche iche banyere nke a.
Nkenke aha onyonyo Eji video assistant referee (VAR) eme mkpebi banyere ọnọdụ na-edoghi anya.
Ndị Naịjirịa ekwuola na mkpebi VAR megidere ha, kwuo na Marcos Rojo nke Ajentina kwesiri iri iwu mgbe oji isi mabanye bọọlụ n'aka ya na St Petersburg - Karịsịa mgbe enyerela Iran penariti maka ọnọdụ yiri nke a.
Agbanyeghi mkpebi a dịka ọ dị njọọ, ogbu bọọlụ hụrụ maka asọmpi Naịjirịa-Ajentina mere mkpebi
Na nke Egypt's - na Afrịka - ihuọma bụ mkpebi inye Salah penariti,bụ nke oji nye ndị Rọshịa goolu.
Ndị Afrịka atụkwasịla ndị ogbu bọọlụ ha mere nkeọma na Rọshịa ma ka nọkwa ebe a, nke bụ na otu n'ime ndị Afrịka ka nwereike ị ga n'ihu n'asọmpi Iko Mbaụwa.